"Ary raha zanaka (isika), dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa."Romana 8:17
"Ny harenan’i Kristy tsy hita lany…"Efesiana 3:8
"Aoka ny tenin’i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo."Kolosiana 3:16
Vao nandova harena be tsy nampoizina ity lehilahy mahantra. Maty tampoka ny dadatoany iray izay tsy niteraka, ary izy no hany mpandova. Indro izy nanjary tompon’ny tranobe iray voahodidina tany midadasika. Tena manankarena izy!
Niomana handray izany fananany izany izy. Menamenatra nefa izy, ka tsy sahy nipetraka avy hatrany tao amin’ilay tranobe. Tao amin’ny trano kely iray natokana ho an’ny mpikarakara zaridaina no nitoetra izy sy ny ankohonany. Tonga nitsidika azy ny vadintany. Gaga ilehio ka nihoraka hoe: «Ramose ô! Ndeha mipetraka ao amin’ny tranobe re ianareo e!». Dia nasehony azy ny taratasy manaporofo fa azy tokoa ireo rehetra ireo. Mba mampalahelo ihany, raha tompona tranobe, kanefa mianina amina trano tery sy tsy dia tomombana!
Rehefa nandray an’i Jesosy amin’ny finoana isika, dia manjary zanak’Andriamanitra sy mpandova ny harenan’Andriamanitra. Matetika anefa ny fiainantsika kristiana no mahantra sy tsy mba mivelatra. Mianina amin’ny fahafantarana hoe voavonjy isika, ary tsy manao izay andraisana ny harena atolotr’i Jesosy antsika, dia ny famelana ny helotsika, ny fahitana fitia lalandava eo imason’Andriamanitra, ny fahafantarana Ilay Ray, ny fahazoana manatona Azy amin’ny alalan’ny vavaka, ny fanafahana amin’ny herin’ny ota, ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, ny fiandrandrana hiray voninahitra amin’Ilay Zanak’Andriamanitra, ary ny fifaliana feno sy ny fiadanana tian’Andriamanitra hiainantsika dieny ety an-tany!
Ny «tombam-pananana voamarin’ny vadintany», ahafantarantsika ny zontsika, dia ny Tenin’Andriamanitra. Ndeha hamaky tsara izany, dia ho fantatsika fa tena manankarena tokoa isika.